Sellics Benchmarker- သင်၏ Amazon ကြော်ငြာအကောင့်ကို စံသတ်မှတ်နည်း | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 15, 2022 အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 15, 2022 Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိ အခြားကြော်ငြာရှင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သို့မဟုတ် သီးခြားချန်နယ်တစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာသုံးစွဲမှု မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကို မကြာခဏဆိုသလို ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခဏ တွေးတောမိပါသည်။ Benchmark စနစ်များကို ဤအကြောင်းကြောင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် – နှင့် Sellics တွင် သင့်အတွက် အခမဲ့ ပြည့်စုံသော စံသတ်မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာတစ်ခု ရှိသည်။ Amazon ကြော်ငြာအကောင့် သင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အခြားသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန်။
Amazon ကြော်ငြာသည်ကုန်သည်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ရှာဖွေသူများရှာဖွေရန်၊ ရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်စျေးဝယ်သူများအတွက်မြင်သာမှုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများကိုပေးထားသည်။ အမေဇုံ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာများသည်မည်သည့်စာသား၊ ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုမဆိုပေါင်းစပ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ထုတ်လွှင့်သည့်အကြောင်းအရာများအထိနေရာတိုင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ထောက်ပံ့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ် - သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လိုဂို၊ စိတ်ကြိုက်ခေါင်းစဉ်နှင့်ထုတ်ကုန်များစွာပါ ၀ င်သောစျေးနှုန်းချိုသာသော (CPC) ကြော်ငြာများ။ ဤကြော်ငြာများသည်သက်ဆိုင်ရာစျေး ၀ ယ်မှုရလဒ်များတွင်ပေါ်လာပြီးသင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ၀ ယ်သည့်ဖောက်သည်များကြားတွင်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကူညီသည်။
ကမကထပြုသောကုန်ပစ္စည်းများ Amazon ၏ထုတ်ကုန်စာရင်းတစ်ခုချင်းစီကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်ဈေးနှုန်း (click-per-click) ကြော်ငြာများ။ ကမကထပြုထားသောထုတ်ကုန်များသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့်ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပေါ်လာသောကြော်ငြာများပါသောတစ် ဦး ချင်းထုတ်ကုန်များ၏မြင်သာမှုကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီသည်
စပွန်ဆာပေးသောပြသမှု - သင်ဝယ်ယူသောခရီးကိုဖြတ်ပြီး၊ အမေဇုံသို့နှင့်အဝေးတွင်စျေးဝယ်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့် Amazon တွင်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြီးထွားစေရန်အထောက်အကူပြုသော Self-service display ကြော်ငြာခြင်း
ပြိုင်ဆိုင်မှုကို ကျော်ဖြတ်ဖို့၊ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဤသည်မှာ Sellics Benchmarker ကိရိယာကို စျေးကွက်ရှိ အခြားအရာများထက် ပိုကောင်းစေသည်။ သင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကြောင်းအရာတွင် ထည့်သွင်းပြီး သင့်အား အရေးယူနိုင်သော ထိုးထွင်းအမြင်များ ပေးဆောင်ပါ။ Amazon တွင် သင့်အား ပိုမိုအမြတ်အစွန်းရှိသော ကြော်ငြာရှင်တစ်ဦးဖြစ်စေရန်။ ဟိ ရောင်းအား Benchmarker Sponsored Products, Sponsored Brands နှင့် Sponsored Display တို့တွင်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆန်းစစ်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်တိုးတက်နေတယ်၊ ​​ဘယ်မှာတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်ကိုအတိအကျပြသသည်။
စပွန်ဆာပေးထားသောကြော်ငြာပုံစံများ - အမေဇုံမှပေးသင့်သည့်ပုံစံမှန်သမျှကိုသုံးပါသလား။ တစ်ခုချင်းစီတွင်၎င်း၏ထူးခြားသောမဟာဗျူဟာများနှင့်အခွင့်အလမ်းများရှိသည်။ စပွန်ဆာပေးသောကုန်ပစ္စည်းများ၊ စပွန်ဆာပေးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စပွန်ဆာပေးသောပြသမှုများကိုဆန်းစစ်ပါ
အသေးစိတ်ရမှတ်: သငျသညျထိပ် 20% - သို့မဟုတ်အောက်ခြေပိုင်လျှင်နားလည်ပါ
အရောင်းကြော်ငြာ၏ကုန်ကျငွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။ACOS): သင်ကမကထပြုကြော်ငြာသည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများမှသင်တိုက်ရိုက်ရောင်းချသောရောင်းအား၏ပျမ်းမျှကြော်ငြာရှင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မည်သို့ရှိသနည်း။ မင်းကရှေးရိုးစွဲလား သင့်ရဲ့အမျိုးအစားအတွက်အမြတ်အစွန်းဒိုင်းနမစ်နားလည်ပါ
Click တိုင်း သင့်ကုန်ကျစရိတ်ကို စံသတ်မှတ်ပါ။ (CPC) တူညီသောကလစ်တစ်ခုအတွက်အခြားသူများမည်မျှပေးဆောင်နေကြသနည်း။ ပြီးပြည့်စုံသောလေလံကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုလေ့လာပါ
သင်၏ ကလစ်နှိပ်မှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပါ (CTR နည်း): သင်၏ကြော်ငြာပုံစံများသည်စျေးကွက်ထက်သာလွန်သလား။ မရရှိလျှင်ကလစ်တစ်ချက်ရယူရန်အခွင့်အလမ်းများကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်ကိုလေ့လာပါ
အမေဇုံကူးပြောင်းနှုန်းကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းCVR): ကြော်ငြာကိုနှိပ်ပြီးသောအခါဖောက်သည်များသည်တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုမည်မျှလျင်မြန်စွာပြီးအောင်လုပ်နေသနည်း။ သင့်ထုတ်ကုန်များကိုအခြားသူများထက်ပိုပြီးဝယ်ပါသလား စျေးကွက်ကိုအနိုင်ယူတတ်ရန်နှင့်စားသုံးသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်သင်ယူပါ
ထုတ်ကုန် 2.5 နှင့် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား 170,000 တို့တွင် ကြော်ငြာဝင်ငွေ $20,000B ကိုကိုယ်စားပြုသည့် ဒေတာအပေါ်အခြေခံ၍ ရောင်းအား Benchmarker စျေးကွက်တွင် အစွမ်းထက်ဆုံး ကြော်ငြာစွမ်းဆောင်မှု ကိရိယာဖြစ်သည်။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဖော်မတ်အစုအဝေးတစ်ခုစီတွင် အနည်းဆုံး ထူးခြားသည့်အမှတ်တံဆိပ် 20 ခု ပါဝင်ပါသည်။ ပျမ်းမျှ အနိမ့်ဆုံးလူ ဦး ရေကိုတွက်ချက်ရန်နည်းပညာပိုင်းအရပျမ်းမျှကိန်းဂဏန်းများဖြစ်သည်။
သင်၏ Amazon ကြော်ငြာအကောင့်ကိုစစ်ဆေးပါ
သင်၏ Sellics Benchmarker အစီရင်ခံစာကို စတင်ခြင်း
ပြီးတာနဲ့ မင်းရဲ့တောင်းဆိုမှုကို ဖြည့်သွင်းလိုက်ပါ။ အရောင်းသမားများ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သင်၏ အခမဲ့အစီရင်ခံစာကို 24 နာရီအတွင်း လက်ခံရရှိပါမည်။ အစီရင်ခံစာကိုဖွင့်သောအခါ၊ အလုံးစုံအကောင့်ရမှတ်ကို ပေးဆောင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်တံဆိပ်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။ ချက်ချင်းဆိုသလို၊ သင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နေသလဲ၊ သင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကို ကောင်းကောင်းကြီး ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ရပါလိမ့်မယ်။ ကြီးထွားမှုအလားအလာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတူညီသော တံဆိပ်များသည် သင့်အကောင့်၏ အလုံးစုံရပ်တည်မှုကို အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့် ထင်ဟပ်သည်-
ပလက်တီနမ်- ရွယ်တူများ၏ ထိပ်တန်း 10%
ရွှေ- သက်တူရွယ်တူများ၏ 20% ထိပ်တန်း
ငွေရောင်- ရွယ်တူများ၏ 50% ထိပ်တန်း
ကြေး- သက်တူရွယ်တူများ၏ အောက်ခြေ 50%။
PRO အကြံပြုချက်: Sellics ၏ Amazon ကြော်ငြာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးနှင့် အခမဲ့ချတ်လုပ်ရန်အတွက် ခေါ်ဆိုမှုခလုတ်ကို စာအုပ်ကို အသုံးပြုပါ။ သူတို့က မင်းရဲ့အနက်ကို ကူညီပေးနိုင်တယ်။ ရောင်းအား Benchmarker သင့်ကြော်ငြာကမ်ပိန်းများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန် Sellics ကို သင်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အစီရင်ခံပါ သို့မဟုတ် သင့်အား ပိုမိုပြောပြပါ။
အောက်တွင် သင်၏ အလုံးစုံ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အကောင်းဆုံးနှင့် အဆိုးဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသသည့် အကျဉ်းချုပ် ကဏ္ဍကို သင်တွေ့လိမ့်မည် (KPI များ) အကြည့်တစ်ချက်။ သင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လိုပါက သို့မဟုတ် သင့်ယခင်လ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လိုပါက ရွေးချယ်ရန် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ ခလုတ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်၏ Amazon Advertising KPIs တွင် ပြောင်းလဲမှုများကို နားလည်ပါ။
ACoS ကဲ့သို့သော မြင့်မားသောအဆင့် KPI များသည် မတူညီသောအချက်များစွာဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲမှုများကို သိရှိရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။
Performance funnel က အရမ်းကောင်းပါတယ်။
သင့်မက်ထရစ်များအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် သင်မြင်နိုင်သည်။
လမ်းကြောင်းသည် သင့် KPIs တွင် မက်ထရစ်အချက်တစ်ခုစီကို မည်သို့ပြောင်းလဲစေသည်ကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်စေမည့် နည်းလမ်းကိုပြသထားသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ နမူနာအစီရင်ခံစာတွင်၊ ကြော်ငြာရောင်းချမှုထက် ကြော်ငြာသုံးစွဲမှု ပိုမိုများပြားလာသောကြောင့် ACoS မြင့်တက်လာသည်ကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ပြောင်းလဲမှုနှုန်းနှင့် ပျမ်းမျှအမှာစာတန်ဖိုး ကျဆင်းလာသည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နိုင်သည် (AOV) ကြော်ငြာရောင်းချမှုကို ပြန်လည်ကျင်းပခဲ့သည်။
ဆိုတာကို သေချာနှိပ်ပါ။ လ-လကျော်-လ ပြောင်းလဲမှုများ အချိန်နှင့်အမျှ သင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခြေရာခံရန် လမ်းကြောင်းအောက်ရှိ ခလုတ်။
အကြီးမားဆုံးသက်ရောက်မှု (အပြုသဘော သို့မဟုတ် အနုတ်လက္ခဏာ) ဖြင့် Amazon ထုတ်ကုန်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
နှင့် သက်ရောက်မှု Driver ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်နှင့် ACoS အပါအဝင် ပင်မ KPI များအားလုံးအတွက် တစ်လပြီးတစ်လ စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် မည်သည့်ထုတ်ကုန်များ—အပြုသဘော (အစိမ်း) နှင့် အနုတ်လက္ခဏာ (အနီရောင်) နှစ်မျိုးလုံး—အပြုသဘော (အစိမ်းရောင်) နှင့် အနုတ်လက္ခဏာ (အနီရောင်)—တို့ကို လျင်မြန်စွာမြင်နိုင်သည်။
Impact Driver Analysis က အဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။ အဓိကမေးခွန်းများကဲ့သို့
ကျွန်ုပ်၏ ကြော်ငြာရောင်းချမှုသည် အဘယ်ကြောင့် တိုး/လျော့လာသနည်း။
ဘယ်ထုတ်ကုန်တွေက ACoS မှာ ကြော်ငြာရောင်းအား ကျဆင်း/တိုးစေတာလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ CPC သည် ပြီးခဲ့သည့်လက မည်သည့်နေရာတွင် တိုးလာသနည်း။
ဤကိရိယာ၏ ဇယားသုံးခု (ရေတံခွန်၊ သစ်ပင်မြေပုံ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ဇယား) ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် သင်၏ အပြင်းထန်ဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်သူများ နှင့် သင်၏ အကြီးမားဆုံး အခွင့်အလမ်းများကို လျင်မြန်စွာ ဖော်ထုတ်နိုင်သည် ။
ဤသည်မှာ ကြော်ငြာသူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ထိပ်တန်း ASIN 100 အတွက် နက်ရှိုင်းသောငုပ်လျှိုးမှုရယူပါ။
ထုတ်ကုန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကဏ္ဍသည် သင့်အား ASIN အဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ကိရိယာ၏အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည် လမ်းကြောင်းကဲ့သို့ပင်၊ ဒီဇိုင်းသည် သင့်အား အစွမ်းထက်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး အရေးအကြီးဆုံးမှာ နားလည်ရန် လွယ်ကူပါသည်။
ပထမဦးစွာကျွန်တော်အသုံးပြုရတာကြိုက်တယ်။ စိစစ်မှုများ ကြော်ငြာသုံးစွဲမှု အနည်းဆုံးပမာဏအတွက် စစ်ထုတ်ရန် ခလုတ်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိသော ထုတ်ကုန်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေမှန်း ကျွန်ုပ်သိပါသည်။
ထို့နောက် ကျန်ရှိသော ထုတ်ကုန်များဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် အမျိုးအစားခွဲများ၏ စံအမှတ်၏ အထက် သို့မဟုတ် အောက်ရှိမရှိ သိနိုင်ရန် KPI များဘေးရှိ ရောင်စုံစက်ဝိုင်းများကို ကြည့်ရှုပါသည်။ အရောင်-ကုဒ်စနစ်သည် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်သည်။
အစိမ်းရောင်- မင်းက ထိပ်တန်း 40% မှာ = အလုပ်ကောင်း
အဝါရောင်- သင် အလယ်တွင် 20% = တိုးတက်ရန် လိုအပ်သည်။
အနီရောင်- သင်သည် အောက်ခြေ 40% တွင် ရှိနေသည် = တိုးတက်မှုအတွက် ကြီးမားသော အခွင့်အလမ်းများရှိသည်။
ACoS ကို အခြေခံအားဖြင့် click-through rate (CTR)၊ conversion rate (CVR) နှင့် cost per click (CPC) ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် များသောအားဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ CTR၊ CVR သို့မဟုတ် CPC ဘေးရှိ အနီရောင်နှင့် အဝါရောင်အစက်များကို ရှာကြည့်ပြီးနောက် စတင်ပါ။ အတူရှိသူများကို optimizing Sellics ဆော့ဖ်ဝဲ.
သင် Sellics ဆော့ဖ်ဝဲကိုမလိုအပ်သော်လည်း သင်၏ အခမဲ့ Sellics Benchmarker အစီရင်ခံစာကို ရယူပါ။ကျိန်းသေ အကြံပြုလိုပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် သင့်အတွက် လေးလံသော သယ်ဆောင်မှုအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြီးမားသောဒေတာ၏ စွမ်းအားကို အသုံးချနိုင်သော အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် AI အင်္ဂါရပ်များရှိသည်။
အင်တာနက်တွင် သင်၏ KPI များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြံဉာဏ်များ အပြည့်ရှိနေသော်လည်း သင့်ကြော်ငြာကမ်ပိန်းများကို မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကို လူအနည်းငယ်က စေ့စေ့စပ်စပ် သိမြင်လာပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကို ပိုက်ဆံအများကြီးပေးမထားရင် အဲဒါပါပဲ။
ဤသည်မှာ အခြားနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Sellics Benchmarker မယုံနိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးကိုပေးဆောင်သည်။ အကောင့်ဖွဲ့စည်းပုံ ကဏ္ဍသည် သင့်အကောင့်ကို မည်သို့တည်ဆောက်ပုံနှင့် အလုံးစုံအမြင်ကို ပေးသည်။ ၎င်းကို အခြားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အကောင့်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်သည်။.
ကိရိယာသည် မတူညီသော မက်ထရစ်သုံးခုကို တွက်ချက်သည်- ကြော်ငြာအုပ်စု/ကမ်ပိန်း၊ ASINs/ကမ်ပိန်း၊ နှင့် အဓိကစကားလုံးများ/ကမ်ပိန်း။ ထို့နောက် တစ်ခုစီအတွက် ဖတ်ရလွယ်ကူသော “အဆင့်များ” ပေးသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းစနစ်သည် အောက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါသည်။
အဝါရောင်- အပြောင်းအလဲအချို့ ပြုလုပ်ရန် စဉ်းစားပါ။
အနီရောင်- သင့်ကမ်ပိန်းများကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
သင်သည် တစ်လလျှင် ကြော်ငြာခတွင် $10,000 ထက်ပိုသော ကြော်ငြာသူတစ်ဦးမဟုတ်ပါက၊ ဤသည်မှာ tool မှ အကြံပြုထားသော ယေဘုယျလမ်းညွှန်ချက်အချို့ဖြစ်သည်။
ကြော်ငြာအဖွဲ့/ကမ်ပိန်း- ကမ်ပိန်းတစ်ခုစီတွင် ကြော်ငြာအုပ်စုအနည်းငယ်ရှိခြင်းက သင့်ဘတ်ဂျက်ကို ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
ကြော်ငြာထားသော ASINs/Ad Group- ကြော်ငြာရှင်အများစုအတွက်၊ ကြော်ငြာအုပ်စုတစ်ခုလျှင် ASINs5ခုအထိ စံပြဖြစ်ပါမည်။
သော့ချက်စာလုံးများ/ကြော်ငြာအုပ်စု- ကြော်ငြာရှင်အများစုအတွက်၊ ကြော်ငြာအုပ်စုတစ်ခုလျှင် သော့ချက်စကားလုံး ၅ လုံးမှ ၂၀ ကြားသည် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Amazon Ad Format သည် Deep-Dive ဖြစ်သည်။
Sponsored Products နှင့် Sponsored Display နှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြုသော ကြော်ငြာရှင်များအတွက်၊ ကြော်ငြာဖော်မတ်သည် နက်ရှိုင်းသော ဒိုင်ဗင်ထိုးခြင်း၏ အကောင်းဆုံး အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည် Sellics Benchmarker အစီရင်ခံစာ.
ဂရပ်ဖစ်တစ်ခုသည် ကျွန်ုပ်၏ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်ဖြန့်ဖြူးမှုကို အမျိုးအစားစံညွှန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြသပေးသည်၊ သို့မှသာ ကြော်ငြာအမျိုးအစားတစ်ခုတွင် ပို၍ သို့မဟုတ် နည်းပါးသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် စဉ်းစားသင့်သည်ကို အလွယ်တကူ သိနိုင်စေရန်။
အောက်ကိုဆင်းလိုက်၊ ကြော်ငြာဖော်မတ်အဆင့် KPI အဆင့်များနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များကို သင်ရနိုင်သည်။ KPIs များထဲမှတစ်ခုဘေးရှိ "+" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါက၊ သင်သည် Sponsored Products နှင့် ကြော်ငြာထားသည့် ASIN များအတွက် ASIN အဆင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Sellics Benchmarker ၏ အကြီးကျယ်ဆုံးသော ရှုထောင့်များထဲမှတစ်ခုမှာ သင်၏ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာအတွက် စာရင်းသွင်းပြီးနောက်၊ ယခင်လက ဒေတာပါရှိသော ရက်ပေါင်း 30 တိုင်း အစီရင်ခံစာကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ သင်သည် သင်၏ Amazon ကြော်ငြာပန်းတိုင်များသို့ ရောက်ရှိရန် သင့်အကောင့်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ချိန်ညှိပြီး ချိန်ညှိနိုင်သည်။
ဤကိရိယာမှပေးဆောင်သောတန်ဖိုးသည်အလွန်ကြီးမားသည်။ သင်၏ အခမဲ့ Sellics Benchmarker အစီရင်ခံစာကို ယနေ့ ရယူလိုက်ပါ။ သင့်ကြော်ငြာကို နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်မှုကို အနိုင်ယူပါ။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ငါတစ် ဦး Affiliate ဖြစ်၏ Sellics.
Tags: Amazon ကြော်ငြာအမေဇုံစပွန်ဆာပေးအမှတ်တံဆိပ်အမေဇုံကမကထထုတ်ကုန်ရောင်းသူ
သင်၏ Amazon အရောင်းမြှင့်တင်ရန် ယနေ့ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော အဆင့်ငါးဆင့်